Noho ny orana nikija: tapaka ny RN5 Fenoarivo Atsinanana-Soanierana Ivongo | NewsMada
Noho ny orana nikija: tapaka ny RN5 Fenoarivo Atsinanana-Soanierana Ivongo
Fahasahiranana miampy fahasahiranana. Izay ny azo ilazana ny zava-manjo ny mpandeha sy ny mpitatitra mampiasa ny lalam-pirenena fahadimy (RN5) mampitohy an’i Fenoarivo Atsinanana sy i Soanierana Ivongo. Tapaka tanteraka ny lalana eo amin’ny fokontany Manantany, 3,500 km tsy hidirana ny renivohitry ny distrikan’i Soanierana Ivongo. Tsy zakan’ny fahanteran’ny fotodrafitrasa intsony ny oram-baratra nikija mafy, ny alin’ny talata 13 avrily teo hifoha ny 14 avrily 2021, sy efa nikikisan’ny rano azy hatramin’ny ela.
Raha 5 000 Ar ny saran-dalana Fenoarivo Atsinanana sy i Soanierana Ivongo, lasa 6 500 Ar izany amin’izao. Mampitombo ny fandanian’ny mpandeha ny fahatapahan-dalana, eo rahateo ny fifindrana fiara hafa hanohizana ny dia rehefa tonga eo amin’ny lalana tapaka.
Amin’izay RN5 izayhatrany, lasa mampiakatra antsokotsoko saran-dalana ny mpitatitra rezionaly miainga avy eto Toamasina mihazo ny tapany avaratra amin’iny faritra Analanjirofo iny. Antony, ifampizarana amin’ny mpitandro filaminana eny amin’ny sakana mampisaraka ny faritra roa, raha ny angom-baovao hatrany.